जाडाेमा ल्वाङ चिया पिउनुका फाइदा, जानिराखौ - ज्ञानविज्ञान
चिया हाम्रो संस्कार हो । अधिकांश नेपालीलाई बिहान उठेपछि एक कप चिया पिउनैपर्छ । अझ सहरी क्षेत्रमा त भेटघाट वा छलफलमा चिया बहाना नै बन्ने गरेको छ ।
तर, चिया बढी पिउँदा त्यसले स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर पुर्‍याउन सक्छ । यद्यपि, शरीरलाई फाइदा पुर्‍याउने चिया पनि छन् । जसमा एउटा पर्छ, ल्वाङ चिया ।
ल्वाङवाला चिया अदुवा र अलैँची चियाभन्दा पनि बढी फाइदाजनक हुन्छ । त्यसैले यस्तो चियाको प्रयोग गर्ने बानी बसाउँदा स्वस्थ्यमा लाभ हुन्छ । यस्तो चिया पिउनुको सबैभन्दा बढी फाइदा रुघाखोकीबाट बच्नका लागि हुन्छ ।
ल्वाङको चियामा हुने गर्मी गराउने तत्वले रुघाखोकीबाट टाढा राख्नुका साथै राहतसमेत प्रदान गर्छ । हल्का भोक छ भने ल्वाङ चियाले निकै फाइदा पुर्‍याउँछ । एक कप तातो ल्वाङको चियामा यस्तो गुण हुन्छ, जसले तत्काल भोकमा राहत प्रदान गर्छ। पछिल्लो समय अधिकांश मानिस हाडको दुखाइको समस्याबाट ग्रसित छन् ।
यस्ता समस्या भएका मानिसले ल्वाङ चिया पिउँदा ल्वाङमा हुने एन्टिइन्फ्लेमेटरी तत्वले राहत पुर्‍याउने गर्छ ।
अहिले एसिडिटी पनि आमसमस्या बन्दै गएको छ । यस्तो हुँदा पेट दुख्ने, पोल्नेजस्ता समस्या पनि हुने गर्छ । यस्तो समस्या हुने मानिसले ल्वाङ चिया पिउँदा त्यसमा भएको औषधीय गुणले पेटलाई आराम प्रदान गर्छ ।
दाँतको दुखाइ छ भने पनि ल्वाङको चिया सेवन गर्दा हुन्छ । यस्तो चियाले दाँत दुखाइमा राहत प्रदान गर्छ । ल्वाङ दाँत दुख्ने समस्याका लागि निकै फाइदाजनक मानिन्छ ।
ल्वाङमा युजेनल नामक तत्व हुन्छ, जसले धेरै प्रकारका स्वास्थ्यसम्बन्धि समस्याबाट मुक्त हुन मद्दत गर्छ । ल्वाङको असर तातो हुने भएकाले चिसो वा रुघाखोकी लागेमा पानीमा उमालेर पिउँनाले फाइदा गर्छ । जान्नुहोस्, ल्वाङका यस्ता १० फाइदाहरू
ल्वाङ खाने गर्नाले मुखमा ‘सेलाइवा’ बढी उत्पादन हुन्छ, जसले खानालाई राम्ररी पचाउन सघाउँछ र पेटमा एसिडिटीको समस्या हुँदैन।
४. रोगसँग लड्ने क्षमता
यदि खानामा ल्वाङलाई पनि मिसाउनु भएको छ भने शरीरलाई रोगसँग लड्ने क्षमता बढ्छ र तपाई धेरै रोगहरुबाट बच्न सक्नुहुन्छ ।
५. अनुहारमा चमक
दिनमा दुई पटक ल्वाङ हालेको चिया पिउनाले अनुहारमा चमक बढ्छ ।
६. नरम छाला
ल्वाङमा पाइने ‘एन्टीओक्सिडेन्ट्सले छालालाई नरम र चमकिलो बनाइराख्न मद्दत गर्छ ।
७. कमजोरी भगाउँछ
८. आँखाका लागि
अधिक मात्रामा पाइने भिटामिन ए ल्वाङले आँखाको ज्योति कायम राख्न मद्दत गर्छ ।
९. दाँत दुखाई
ल्वाङमा पानइने ‘एन्टी इफ्लेमेटरी’ गुणले दातको दुखाईलाई कम गर्न मद्दत गर्छ ।
यसमा ‘युजेनल’ पाइन्छ । बिहान–बेलुका ल्वाङको चिया पिउनाले पिनासको समस्याबाट राहत पाउँन सकिन्छ ।
पहिला दुईदेखि तीनवटासम्म ल्वाङ लिनुहोस् । त्यसलाई पिँधेर पाउडर बनाउनुस् । यस्तो पाउडरलाई पानीमा हालेर १० मिनेटसम्म उमाल्नुस् । र, त्यसमा आवश्यकताअनुसार चियापत्ती र चिनी राख्नुस् । त्यसपछि दूध राखेर केहीबेर पुनः उमाल्नुस् । अनि तयार हुन्छ, ल्वाङ चिया ।
Don't Miss it जाडोमा गर्नै नहुने केहि गल्तीहरु
Up Next के तपाईं ओछ्यानमा बस्दा खाना पनि खानुहुन्छ, त्यसोभए निश्चित रूपमा यो खबर पढ्नुहोस् वा अन्यथा यो घाटा हुनेछ
दिमागको कसरत गर्नुहोस् र भन्नुहोस्, कति वटा पाण्डा देख्नुहुन्छ ? – २० वटा तस्विरहरु
जानिराखाैँ दुबाे खानाले यस्ताे फाइदा पुर्याउदाे रहेछ हाम्राे स्वस्थ्यमा
दुबो हामी सबैको लागी परिचित झार हो । यसलाई नदेख्ने सायदै कोही होलान । यो हाम्रो घर वरिपरिको आगनमा उम्रिरहेको…